MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » MOFA issues press release
by adminmofa on 09/02/2017 at 4:40 PM
The Office of the High Commissioner for Human Rights issuedareport entitled “Interviews with Rohingyas fleeing from Myanmar since9October 2016” on3February 2017. The Government of Myanmar considers the allegations contained in the report very serious in nature and is also deeply concerned about the report. Thus, the Government is investigating these allegations through the investigation commission led by Vice-President U Myint Swe. As State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi made it clear in her telephone conversation with OHCHR High Commissioner Prince Zeid Ra’ad Al Hussein on 3rd February, where there is clear evidence of abuses and violations, the Government will take necessary measures.
The Government of the Republic of the Union of Myanmar places high priority on addressing the situation in Rakhine State, and is striving to findadurable solution.
The Government is takingacomprehensive approach with the aim of fostering peace and stability in the State. It has adopted short and long term programmes to promote understanding and trust. The Government has formed the Central Committee on Implementation of Peace, Stability and Development of Rakhine State on 30th May 2016 with State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi as Chairperson. Four working committees have been set up to facilitate the work of the Central Committee.
The Government of Myanmar has also established the Advisory Commission on Rakhine State, chaired by Dr. Kofi Annan, former Secretary-General of the United Nations, to support the Government’s efforts in addressing the issue comprehensively. Prior to issuing its final report in second half of 2017, the Commission will be submitting its interim report to the Government of Myanmar.
Even as constructive steps were being undertaken, three police border outposts in northern Rakhine State were attacked by armed men funded and inspired from abroad on9October 2016. As the International Crisis Group (ICG) noted in their recent report, the attack seriously threatens the prospects of stability and development in the state. In these circumstances, the Government is taking steps to ensure the safety and security of its people. The Myanmar security forces have been instructed to act within the parameters of rule of law in compliance with human rights refraining from use of excessive force. The Government will spare no effort to take legal action against any perpetrators if there is clear evidence of human rights abuses.
On 1 December 2016, an investigation commission led by Vice President U Myint Swe was formed to look into the causes of9October and 12-13 November attacks and their consequences. The mandate of the Commission which inheres the guarantee of security and human rights for all the people of Rakhine, requires it to verify all allegations including those related to area clearance operations. The Commission was tasked to submitareport on 31 January 2017. However, the submission date has been extended so thatathorough report could be prepared after necessary investigations. Myanmar also facilitated the visits of Ambassadors, media and international experts including Ms. Yanghee Lee, Special Rapporteur of the situation of human rights in Myanmar, to the affected areas in Rakhine State. International aid organizations are resuming humanitarian aid to many affected areas in Rakhine.
Since the new Government took office, promotion and protection of human rights has been high on its agenda. The work of the National Investigation Commission with regard to all allegations will continue and action will be taken against the perpetrators of illegal acts and human rights violations. The Government of Myanmar stands firm in its commitment to national reconciliation and peace throughout the country.
၁။ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး (Office of the High Commissioner for Human Rights ) သည် “Interviews with Rohingyas fleeing from Myanmar since9October 2016” ခေါင်းစဉ်ပါ အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ အစီရင်ခံစာတွင်ပါရှိသည့် စွပ်စွဲချက် များသည် လွန်စွာစိုးရိမ်ဖွယ်ရာ သဘောသဘာဝရှိသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက ထင်မြင်ယူဆ ပြီး၊ ယင်းအစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ များစွာစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိသည်။ သို့ပါ၍ နိုင်ငံတော်အစိုးရ သည် ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေ ဦးဆောင်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်မှ တစ်ဆင့် ယင်း စွပ်စွဲချက်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိပါသည်။ ယင်းသို့ ကျူးလွန်ခဲ့သည့် အထောက်အထား အခိုင်အမာရှိပါက အစိုးရအနေဖြင့် လိုအပ်သော အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဟု နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီး မစ္စတာ ဇိုင်ယာ့ဒ် အယ်လ်ဟူစိန် နှင့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင် တယ်လီဖုန်းပြောကြားစဉ် ရှင်းလင်းစွာ ပြောကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသည် ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေကို ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ရန် အထူးအလေးထားကာ ရေရှည်တည်တံ့သည့် အဖြေတစ်ခုရရှိရေးကို ကြိုးပမ်း လျက်ရှိပါသည်။
၃။ အစိုးရသည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေး မြှင့်တင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ် လျက် ဘက်ပေါင်းစုံချဉ်းကပ်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ နားလည်မှုနှင့် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် ရေတိုရေရှည် အစီအမံများ ချမှတ်ထားရှိပါသည်။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်ရေး အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဗဟိုကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းရပ်များ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက် လုပ်ငန်းကော်မတီ (၄) ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
၄။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည့်စုံစွာဖြေရှင်းနိုင်ရန် အစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေမှုများကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူး ချုပ်ဟောင်း ဒေါက်တာကိုဖီအာနန် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင်ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်သည် ၎င်း၏ အစီရင်ခံစာ အပြည့်အစုံကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒုတိယနှစ်ဝက်ပိုင်းတွင် မထုတ်ပြန်မီ ကြားဖြတ် အစီရင်ခံစာ တစ်စောင်ကို မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရထံသို့ တင်သွင်းသွားရန်ရှိပါသည်။
၅။ ယင်းကဲ့သို့ အပြုသဘောလုပ်ဆောင်ချက်များ ဆောင်ရွက်နေသည့်တိုင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ နယ်ခြားစောင့်ရဲစခန်း(၃)ခုကို နိုင်ငံရပ်ခြားက ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးလှုံ့ဆော်ပေးထားသော လက်နက်ကိုင်များက တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။ မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် International Crisis Group (ICG) ၏ အစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း ယင်းတိုက်ခိုက်မှုသည် ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလားအလာများအပေါ် ကြီးမားစွာ ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့သော အခြေအနေ များတွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် ပြည်သူလူထု၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကို တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဘောင်အတွင်းမှ လူ့အခွင့် အရေးနှင့် ညီညွတ်စွာဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အင်အားအလွန်အကျွံသုံးခြင်း မပြုရန် ညွှန်ကြား ထားရှိပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ကြောင်း ခိုင်လုံသောအထောက်အထားများ တွေ့ရှိ ပါက ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သည့် မည်သူ့ကိုမဆို အစိုးရအနေဖြင့် ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
၆။ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့နှင့် နိုဝင်ဘာလ ၁၂ မှ ၁၃ ရက်နေ့အထိ တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ရသည့် အကြောင်းရင်းများနှင့် နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေ ခေါင်းဆောင်သည့် စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းကော်မရှင်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိပြည်သူအားလုံး၏ လုံခြုံရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများကို အာမခံချက်ပေးနိုင်ရေး မှာ အလိုအလျောက် ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပြီး၊ နယ်မြေရှင်းလင်းရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စွပ်စွဲမှုများ အပါအဝင် စွပ်စွဲချက်အားလုံးကို မှန်ကန်မှုရှိ-မရှိ စိစစ်သွားရန် ပါဝင်သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းရန် ကော်မရှင်ကို တာဝန်အပ်နှင်းထား သော်လည်း လိုအပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်၍ ပြည့်စုံသည့် အစီရင်ခံစာတစ်စောင် ပြုစုနိုင်ရန်အတွက် အစီရင်ခံစာတင်သွင်းရမည့်ရက်ကို သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးထားပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ထိခိုက်ခဲ့သည့်ဒေသများသို့ သံအမတ်ကြီးများ၊ မီဒီယာနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေဆိုင်ရာ အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူ မစ္စယန်ဟီလီ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူများ၏ ခရီးစဉ်များကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက စီစဉ် ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေး အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်လည်း ယင်းဒေသများ တွင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများ ပြန်လည်ပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။
၇။ အစိုးရသစ်တာဝန်ယူချိန်မှစ၍ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်ရေးကို အထူး အလေးထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အမျိုးသားစုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်သည် စွပ်စွဲချက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ၎င်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွား မည် ဖြစ်ပြီး၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုနှင့် တရားမဝင်လုပ်ရပ်များ ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်သူ များကို အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာအစိုးရသည် နိုင်ငံတစ်ဝန်း အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များကို အခိုင်အမာ ထိန်းသိမ်းသွားမည် ဖြစ်သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်